The Gardener: Zephyr is thinking ...
Zephyr is thinking ...
အခုတလော ... ၀ိုင်းစု စကတ်ပိုတိုလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို တော်တော်လေးတွေးမိပါတယ်။
မကြည့်ချင်ရင်မကြည့်နဲ့။ ကြည့်ချင်တဲ့သူကြည့် ....။ မကြည့်တဲ့သူကကောင်းသလား။ ကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးတယ်မှတ်တဲ့သူကကောင်းသလား။ မကြည့်ဘဲမကောင်းဘူးပြောတဲ့သူကကောင်းသလား။ ကြည့်ပြီးမကောင်းဘူး ပြောတဲ့သူကောင်းသလား ... အစရှိတာတွေကို ဘလော့ဂါတွေက စေတနာသုံးတန်ပြဌာန်းပြီး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားရင်း ဂျီးတော် ကားမောင်းကြပါလိမ့်မယ်။
အခုတလော ... ကျေးဇူးတရားမှာ ခါတော်မီကျေးဇူးရှင်တွေနဲ့ ... အမှန်အကန် ကျေးဇူးရှင်များဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းရှိလာကြောင်း ဘလော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများမှ မှတ်ချက်ပြုပြောကြားလာပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော့်အယူအဆကရှင်းပါတယ်။ စာနယ်ဇင်း ( သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်း သုံးမျိုးပေါင်းပြီး စာနယ်ဇင်းဖြစ်လာတာ ... အမှန်က ပါမျူတေးရှင်းနဲ့သာရောလိုက်ရင်း သမနယ် တို့ ဂျာသမ တို့ နယ်တင်းဇင်း တို့ပါ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။) .. သမားတွေနဲ့ ဂါနယ်စဉ်း ( Blogger၊ နယ်မြေသစ်ရှာဖွေသူ၊ မျက်စိတွေစဉ်းလာအောင်ရေးနိုင်သူများ ကို ဆြာ Zephyr ကမြန်မာမှုပြုတယ်လို့ကြားရပါတယ်။) သမားတွေ ကိုယ့်အယူအဆကိုယ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်တာက ပြဿနာရဲ့ ရင်းမြစ်ကို မသိဘဲ ကြုံရင်ဝင်ဆဲသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကို မုန်းတာနဲ့ စာကိုမုန်းတာနဲ့ကို ရောပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဥပမာဗျာ .. ကျွန်တော့်ကိုမကျေနပ်ရင် ... Facebook မှာ Zephyr မုန်းတီးသူများအဖွဲ့ထောင်ပေါ့။ တတ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်ပြန် .. ပါတီတစ်ခုထောင် ...။ Zephyr မုန်းတီးသူများပါတီ။ အဲဒီလို ကျကျနနမုန်းခွင့်ရှိတယ်။ လူကိုမုန်းတာနဲ့ စာကိုမုန်းတာက တခြားစီပါ။ ဥပမာ ကျွန်တော်က သိပ်အားနေတာနဲ့ အဘိဓမ္မာထဲကစာပိုဒ်ကြီးကို Bold လုပ်ပြီးတင်တယ်ဆိုပါတော့။ Zephyr မုန်းတီးသူများအသင်းက အဲဒီစာကို မုန်းတယ် တလွဲတွေကွာ ...ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ Joke of the Thanthayar!!!! (သံသရာမှာ အရယ်ရဆုံးပြက်လုံးကို ဗျစ်တသျှလိုရေးထားတာပါ)။
မနေ့က ဖိနပ်ဆိုင်မှာ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက် ဖိနပ်ရွေးနေတယ်။
သူစီးနေတာ ရှစ်ရံရှိပြီလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဖိနပ်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းကိုထိုင်စောင့်ရင်း သူ့ကိုတွေ့တာပါ။ သူနဲ့လိုက်တဲ့ဖိနပ်ကို ညီမကပြောတော့ သူအဲဒါကို ၀ယ်သွားတယ်။ လူတွေဟာ ကိုယ်နဲ့ဘာနဲ့လိုက်သလဲဆိုတာတောင် တခြားသူတွေရဲ့ထောက်ခံချက်လိုနေသေးတယ်လို့တွေးမိတယ်။ စာတစ်ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှုတဲ့အခါ ရေးတဲ့သူဘယ်သူဆိုတာကိုမေ့ထားလိုက်ပါ။ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရေးပြီး အေလင်ကွန်းမိန့်ခွန်းထဲက ကောက်နှုတ်ထားတာလို့ဆိုရင် ခင်များ ကြိတ်လေးစားစရာလို့တွေးမိနေလိမ့်မယ်။ ... ရွေးနေရုံနဲ့မပြီးဘူး ... ဘ၀မှာ ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။ အကောင်းအဆိုးတွေကို ဝေဖန်ရင်း ကိုယ့်မှာအကုသိုလ်မဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာလည်းလိုသေးတယ်။ မကောင်းဘူးလို့ကိုယ်ထင်တာကြောင့် ဒေါသထွက်နေမိရင် ကိုယ်ပဲပင်ပန်းနေမယ်။ ပထမဆုံးထားသင့်တဲ့သဘောထားက တခြားသူတွေကြောင့် ကိုယ့်မှာ အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေဖို့ပါပဲ။
ငယ်တုန်းက အသိဘုန်းကြီးတွေရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခဏခဏရောက်ပါတယ်။
ဆယ်တန်းဖြေပြီးကာစမှာတစ်ခေါက်ရောက်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျောင်းထိုင်ကပြောတယ်။
"ဒကာလေး အရေးကြီးတာ လုပ်ချင်ရင် အရေးမကြီးတာနဲ့ အချိန်မကုန်စေနဲ့" တဲ့။ အဲဒီစကားကို အမြဲတမ်းသတိရနေမိတယ်။ အချိန်အကုန်ခံလောက်အောင် အရေးကြီးတာတွေ လုပ်နေတာတောင် အချိန်ကမလောက်ပါဘူး။ အပိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ လုပ်မယ့်အချိန်တွေကို ဖြုန်းလိုက်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။ တခြားဘယ်သူမှမနစ်နာခင် ပထမဆုံးကိုယ်နစ်နာသွားပါပြီ။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်။ အမှိုက်ရှိရာ ခွေးချေးလာမှာပဲတဲ့။
အမှိုက်ရှိရာကို သွားရင် ခွေးချေးဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ ခွေးချေးရော အမှိုက်ပါ ကျုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကိုယ်က သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမှိုက်တွေ ခွေးချေးတွေ ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကို သိပြီးရှောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခု သိပ်ကြိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုက Agree to Disagree ပါ ....။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက တရားထဲမှာပါပါတယ်။ လူတွေက လက်မခံရင်လည်း အဲဒီလက်မခံတာကို လက်ခံပေးရမယ်။ လူတိုင်း ကိုယ်တွေးသလိုတွေးမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ အတွေးအခေါ်မတူညီတာဟာ တစ်ယောက်ယောက်က လွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ x+2=? ဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာ x တန်ဖိုး တစ်ခုစီရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်စီရဲ့ အဖြေတွေကို တူနေမယ်လို့မမျှော်လင့်သင့်ဘူး။ ဒါဟာ အမှန်လို့ ပြောမယ့်အစား ...ဒါကို အမှန်လို့ ငါယုံကြည်တယ်ဆိုတာက ပိုပြီးမျှတတဲ့ဆွေးနွေးသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှာတော့ အမိန့်တော်မြတ်အတိုင်းပါဘုရာ့ဆိုတဲ့ .... ကိုယ်ပြောတာအမှန်ဖြစ်ခွင့်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သက်ဦးဆံပိုင်နေ ..ဦးပိုင်အကုန်ပိုင်စနစ် တွေဘာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ... (sorry မှားသွားတာ :P) သက်ဦးက ဘာမှမပိုင်တော့ဘူး ...။ သက်ဦးမှာ ပိုင်တာဆိုလို့ လွတ်လပ်စွာ တင်ပြခွင့်ပဲရှိတော့တယ်။ (လွတ်လပ်စွာ တင် ပြခွင့်ဆိုတော့ ကြားရတာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေပြန်ရော ...။ တကယ်လို့ အဲဒီလို လွတ်လပ်စွာ တင်တစ်ခုတည်းပြခွင့်ရှိရင် သက်ဦးက သူ့တင်ကို ပြနေဦးမှာလား ဆိုတာကတော့ ဆက်လက်တွေးခေါ်လိုသူတွေအတွက်ချန်ထားလိုက်ပါတယ်။ )
အခုတလော ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွေလာနေတော့ ... အားပေးဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားမိတာတော့ ကန်တဲ့သူတွေထက် ပရိတ်သတ်ထဲက ဘာကို မှုတ်နေမှန်းမသိဘဲ နားညည်းအောင်လုပ်နေတဲ့ အသံပါ။ ဘောလုံးသမားတွေကန်ရမှာလား နားညည်းရမှာလား ဝေခွဲမရဘဲ ပွဲတွေပြီးပြီးသွားတာကြည့်ပြီး ဘလော့ခ်တွေမှာရှိတဲ့ ကော်မန့် တဲရိုးရစ်စ် (ဒါကလည်း ဆြာ Zephyr ရဲ့ ထိရောက်တဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။) တွေကို သတိရမိပါတယ်။ မျှမျှတတ အားပေးချင်ရင် ဆူညံသံတွေ အလွန်အကျွံ မလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ ဆူညံသံလုပ်ချင်တာနဲ့ ကွင်းထဲလက်မှတ်ဝယ်ပြီး ဘောလုံးပွဲမကြည့်ပဲ လာဆူညံနေတယ်လို့ပဲ ယူဆမိပါတယ်။
.... အခုလို ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲအခါသမယမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အသင်းကိုယ်အားပေးရင်း ... မျှတသန့်ရှင်းစွာ ကစားတာကို တိတ်တဆိတ်အားပေးတတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Notes: အခုတလော စင်ကာပူမှာ အင်မတန် Pass တွေ Reject ထိပါတယ်။ Appeal ပြန်တင်ရပါတယ်။ Appeal တင်ဖို့ ကိုယ့်ကို အလုပ်လျှောက်ပေးတဲ့ company ကို ပြောကြပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ Appeal ပြန်တင်ရင် သုံးပတ်အတွင်း Approve ဖြစ်ပါတယ်။ Reject ထိပြီး Appeal ပြန်တင်ထားရတဲ့သူတွေလည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ OK သွားမှာပါလို့အားပေးချင်ပါတယ်။